ब्रिटिश वित्तीय हृदयको लागि ब्रेक्सिट खराब छैन: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
हिजो हामी संयुक्त राज्य र जिब्राल्टर युरोपेली संघ सदस्यता referendum (युरोप बाट ब्रिटिश द्वारा एक निस्कनुहोस् छ) लन्डन को वित्तीय हृदय लागि गम्भीर वित्तीय निहितार्थ छ भनेर राष्ट्रिय समाचार देखे। तथापि, यो पूर्ण बकवास छ भने हामी लन्डन को आर्थिक दिल को वास्तविकता को जांच को लागि खुदाई को बारे मा गंभीर हो। यो सबै हामीलाई भिटिक्ट र पुरातन मिस्रसम्म पुग्छ। तर तपाईं छान्नु अघि, तपाईं ऐतिहासिक posturing गर्न चाहँदैनन् किनभने, यो उपयोगी लन्डन को वित्तीय हृदय एउटा स्वतन्त्र निकाय हो भनी थाह हुन सक्छ। यो राज्यभित्र एक राज्य हो। यो पनि न्यूटर्क मा वेटिकन सिटी र कोलम्बिया जिल्ला मा लागू हुन्छ। यी तीन स्वतन्त्र राज्य त्यसैले स्वतन्त्र युरोप को, अमेरिका बाट अलग र अलग विश्वभरिका (एक अर्को अलग्गै) बाट सञ्चालन। तपाईं त्यसैले पहिले नै मिडिया सेट के, लन्डन को वित्तीय हृदयले संयुक्त राज्य र जिब्राल्टर युरोपेली संघ सदस्यता referendum, पूर्ण अर्थहीन अन्तर्गत नेतृत्व भनेर भन्ने तुरुन्तै निष्कर्षमा पुग्न गर्नुपर्छ। वास्तवमा, यसले मात्र कुरा गर्दैन। वित्तीय लन्डनको दिल वास्तवमा संसारमा सबै वित्तीय गतिविधिहरूको केन्द्र हो। र यदि 1 च्यानल मार्फत बहने वाला कम पैसा छ, केहि अन्य भाप अर्को च्यानल को माध्यम ले बह रहेको छ। बाँया वा दाँया तिर, लन्डनको सिटी सधैँ जित्छ।
संसारलाई के गर्दैछ भन्ने बुझ्न, यो इतिहासमा डुब्न उपयोगी छ। त्यसपछि हामी धेरै विशेष खोजहरू आइपुग्यौं। हामी पत्ता लगाउँछौं कि ब्रिटिश शाही परिवार हिब्रू फरुन रक्तलाइनहरूको सीधा सन्तान हुन्। उही अन्य शाही घरहरूमा लागू हुन्छ, यद्यपि सबै चीजहरू फिर्ता पाउन सकिँदैन। योसँग सबै वही शासकहरू र ईश्वरीय र नाम परिवर्तन जस्ता चीजहरू द्वारा इतिहास झूठिकरण गर्न सबै कुरा छ। तर के स्पष्ट हुनुपर्छ वेटिकन एक पेट मा यी स्वतन्त्र राज्य अमेरिका र32 1 हातमा केन्द्रीय ब्रिटिश फिरऊनले रानी एलिजाबेथ द्वितीय साथ भूमिका खेल्छ छ। हो, तपाईं यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ: ब्रिटिश फार्न रानी एलिजाबेथ II। केही लागि त्यो याकूबका पत्थर मा एक मिनी-पिरामिड को शीर्ष कदम मा erected थियो कि एक सिंहासनमा पहनाया थिएन। यसलाई हामी याकूब वास्तवमा मिश्री फिरऊनले आमिन Meth आई भेटिकन को 1 जुम्ल्याहा छोराहरू2फिरऊनको पुरातन पुजारीको रूपमा देख्न सकिन्छ कि पत्ता सम्म त केहि को अनुहार मा भन्छन् र त्यसैले तपाईंलाई अन्योन्य हुन सक्छ फिरऊन र तिनका पुजारीहरू बीच पत्ता लगाउँछन्। तपाईं पनि वास्तवमा सन्तानहरू फिरऊन र सबै धार्मिक नेताहरूले फिरऊनले पुजारी-सन्तानहरू छन् संसारमा सबै नेताहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जटिल छ? हो, तर जान्न महत्त्वपूर्ण छ, गम्भीरतापूर्वक नजिकको हेर्न एक क्षण लिनुहोस्।
यो सबै बुझ्न सक्षम हुनुको लागि, हामी पहिला इजरायलको इतिहासमा एक नजर राख्नुपर्छ। इजरायलको मूल नाउँ वास्तवमा कनान थियो र कनानीहरू बसिरहेका थिए। यो वास्तवमा फिलीस्तीनी मानिसहरूका पुर्खाहरू हुन् जुन वर्तमानमा गाजा पट्टीमा र इजरायली राज्यद्वारा पश्चिम बैंकमा राखिन्छन्। मिश्रबाट banished बारेमा 3500 वर्ष पहिले Semitic 100 वर्ष मिश्र शासन गर्ने राजा, कनान usurp गर्न। तिनीहरूले देशलाई इजरायललाई नामाकरण गरे। मिश्रीहरूले यी निर्वासित सामीनीहरूलाई हबारूको नाम दिए, जसबाट हिब्रू व्युत्पन्न हो। 135 मा देश कांग्रेस पुन: नामाकरण भयो प्यालेस्टाइन र 1948 सम्म, स्वतन्त्रता को Israeli युद्ध पछि, नाम द्वारा पुनर्जीवित डेभीड बेन-गोरेयन। "यो सबै लन्डन शहर संग र ब्रिटिश शाही परिवार वा ब्रेक्सिट, व्रिजल्याण्ड संग के गर्नु पर्छ?"हो, तपाईं धैर्य हुनुपर्दछ, यो रोचक हुनेछ।
बाइबलले हामीलाई इस्राएलीहरू मिस्रमा दासको रूपमा रहने थियो भनेर हामीलाई सिकाउँछ। पुरातत्वविद्हरूले वास्तवमा यसको लागि कुनै प्रमाण पाएनन्। यो छलछाम मिश्र बाहिर हिब्रू मानिसहरूलाई आफ्नो जादू छडी संग समुद्र क्षेत्रमा के गर्न छ नेतृत्व भनेर मोशाको कथा सुरु। यो दृढ देखिन्छ कि बाइबिल क्यारेक्टरहरू मिस्र फरुनबाट व्युत्पन्न हुन्छन्। Archaeologists हिब्रू मानिसहरूलाई छिमेकी देशका एक काम वर्ग आप्रवासी अतिथि कार्यकर्ता शामिल छ भनेर पत्ता छन्। मिश्रको कलावादी संग मिश्रण गरेर तिनीहरूले बिस्तारै मिश्रको भित्र सामाजिक सीढीमा उठेका थिए। यो सबै अब्राहाम संग सुरु हुन्छ। उहाँले कनान (आजको इजरायल) जन्म उत्तर चाहन्छु र अन्ततः जहाँ एक सेक्स दासको रूपमा आफ्नो बहिनी माथि सुन र चाँदी लागि विनिमय मा हस्तान्तरण फिरऊनलाई मिश्र, यात्रा गर्न आफ्नो बहिनी सारा विवाह गरे। बदलामा, फरुन (परमेश्वरले) ले तिनको सन्तानको निम्ति उज्ज्वल भविष्यको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि उसले पुरुष सन्तानलाई एक प्रकारको चिन्हको रूपमा खतना गर्न थाल्दछ (तलका वृत्तचित्र अनुसार)। समयमा शासन फिरऊनले आमिन म Meth Meth आमिन गरेको "टाउको" को लागि खडा हुनेछ वा आमिन 'भगवान' छ, नाम थियो आमिन। यो धार्मिक शब्द 'एनिम' बाट व्युत्पन्न हुनेछ, जहाँ मसीही संसारमा हरेक प्रार्थना अझै समाप्त हुन्छ।
थप स्पष्टीकरणका लागि वृत्तचित्रमा हेर्नुहोस्। यो पुरातात्त्विक आविष्कारहरू वास्तवमा भ्रम (वा इतिहासको जानबूझकर falsification) त Reigning फिरऊनले आमिन Meth संग अनुसार बाइबलीय आंकडा अब्राहामलाई तल फोडे मैले गर्थे अब्राहाम आमिन Meth दुवै म कहिल्यै रहिरहन्छ यो छ किनभने, यो वृत्तचित्र अनुसार पाइएको छ 'करारको सन्दूक', एक पोर्टेबल "ताज" यहूदीहरूलाई पवित्र छ। लामो कथा बनाउन को लागि: Amenemeth म फिरौन पूजा Amen Ra को पूजा गर्नेछन्। यो फेरि शनि शनि को एक सन्दर्भ हुन सक्छ, जुन मैले सुनेको छु, किनभने Ra शनिको लागि खडा छ। यो के हो? पूजाको साथ मानव र विशेष गरी बाल बलिदानको साथ थियो।
किन यो प्रयास गर्ने यो प्रयास गर्ने? खैर, यो हामी अभिजात वर्ग को सबै प्रतीक र गोप्य समाजमा भन्दा हेर्न भने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को "हिब्रू" फिरऊनले आमिन Meth आई को संतान छ कि digging धेरै पछि बाहिर जान्छ, हामी उद्भव मिश्रको प्रतीकात्मक रूप देखेर छन्। तपाईंको ज्ञानलाई गहिरो बनाउन समस्या लिनुहोस्। साथै हाम्रो पूजा पूजा वा शनि पूजा हामी हाम्रो वरपर हरेक ठाउँमा देख्छौं। वेटिकन, लन्डन सिटी, र वाशिंगटन डीसीमा कोलम्बिया जिल्लाको केन्द्रीय बिन्दुहरूमा ओबेलिसहरू फेरि मिस्र प्रतीकहरू छन्।
यदि तपाइँ साँच्चिकै निम्न कागजातलाई हेर्नको लागी समस्या लिनुहुन्छ भने, तपाइँ पत्ता लगाउनुहुनेछ कि सबै केहि जडित छ। राजकुमार विलियम एक मुसलमान महिला विवाह भनेर भविष्यवाणी साँचो छैन, तर पाठ्यक्रम को अभिजात वर्ग, तिनीहरूले के भन्नुभयो र बोली र आफ्नो योजना ढाकछोप गर्न सबै गर्नेछ हेरिरहेको छ। तल लाइन धेरै पहुँचमा भएको अक्टोपस संग फिरऊनले-सन्तानहरू शक्ति संरचना तुलना छ। को Rothschilds, Schiffs र वारबर्ग जस्तै परिवार मार्फत सम्पूर्ण बैंकिङ आफ्नो खल्ती मा सिस्टम भएका धेरै धनी परिवार को भाग। केन्द्र अक्टोपस र यसको फिरऊनले-सन्तानहरू (ब्रिटिश शाही परिवार र अन्य शाही घरहरू) र आफ्नो फिरऊनले पुजारी आदेश (रोम, भेटिकन) को टाउको बन्ने छ मा। यस तथ्यले ब्रेक्सिटलाई लन्डन शहरको आर्थिक समृद्धिमा केही असर पनि हटाउनेछ। बाँया वा दाँया, सबै ओक्टोपसको टाउकोमा दौड्छ। यी फरारहरू मात्र काम गरिरहेका छन् मात्र एकैछिनमा विभाजित र विजयको खेल हो। तिनीहरू युद्ध, संघर्ष र अशांतिको निर्माणमा बाँचिरहेका हुन्छन् र सधैंबाट लाभ उठाउँछन्। तिनीहरू आफ्नो ईश्वर राय, वा भलाइको सम्मानमा युद्ध, डर र रक्तचापको समयमा जारी ऊर्जामा बाँचिरहेका छन् शनि। तपाईंको अनुसन्धान गर्नुहोस्। यो एकदम गहिरो छ, तर धेरै सार्थक।
नाइजील फरेज मा नेइसेकिउुर को ब्रेक्सिट को बारे मा
ट्याग: बैंकिंग, Brexit, विशेष, वित्तीय हृदय, वित्तीय क्षेत्र, लन्डनमा, लन्डन सिटी, मार्टिन भिजल्याण्ड, भ्याटिकन
14 मई 2016 मा 19: 58
15 मई 2016 मा 08: 51
मार्क पासियो द्वारा यो प्रस्तुतीकरणले यो पनि जोड्दछ: https://www.youtube.com/watch?v=oiCnrn6LkUo
फरारहरू जसले 'देवता' को सहयोग गरे र त्यसैले उनीहरूको सुअवसरको लागि तिनीहरूको रगत पाउन धेरै महत्त्वपूर्ण थियो।
15 मई 2016 मा 14: 45
प्रोफेसर। वाल्टर जे। वेथीले यस विषयमा धेरै रोचक व्याख्यान दिन्छन् र सबैजना आइपुग्यो जुन यो टाढा छ। शायद आफ्नो व्याख्यान हेर्न को लागी उपयोगी छ, तल व्याख्यान विशेष गरी रोचक छ किनकी उहाँले स्रोतहरु र आरसी को सिद्धान्त जस्तै: "रेरमन नोवेरियम"
« आफ्नो बच्चाहरु लाई मार्नुस् र तपाई केवल2वर्षहरू जस्तै Yasmine एम को बयानमा आज प्राप्त गर्नुहुन्छ
लाभ यूक्रेन यूरोविजन साङ् प्रतियोगिता बेशक छेदित कार्ड, डाउवे बब 11e »
कुल भ्रमण: 14.713.900